काठमाडौं प्रहरी अवार्ड : को – को पुरस्कृत भए ? - काठमाडौं प्रहरी अवार्ड : को – को पुरस्कृत भए ?
काठमाडौं प्रहरी अवार्ड : को – को पुरस्कृत भए ?
२०७५, २० भदौ, 02:29:08 PM
प्रहरी नायब निरीक्षकको पुरस्कार राशि २५ हजार रुपैयाँ र प्रहरी सहायक निरीक्षकको २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रहरी हवल्दारतर्फ किशोरकुमार गोले र रुपबहादुर थापा पुरस्कृत भएका छन् । उनीहरुले १५ हजार रुपैयाँ संयुक्त रुपमा पाएका छन् ।